CB inotaura Nhoroondo Yese ye legend yebhokisi rine zita rekudana “Iron Mike". Our Mike Tyson Childhood Story pamwe neS Untold Biography Facts inounza iwe nhoroondo yakazara yezviitiko zvakakurumbira kubvira paudiki hwake kusvika panguva.
Kutanga kubva, Michael Gerard Tyson akazvarwa musi we 30th waJune 1966 kuBrownsville, kuBrooklyn, New York. Akanga ari wechitatu wevana vatatu vakazvarwa naamai vake, Lorna Smith uye kuna baba vake, Jimmy Kirkpatrick.
Kukura kuBrownsville iyo yaizivikanwa nehupamhi hwemhosva yepamusoro panguva iyoyo, wechiduku Tyson aibatwa nechisimba uye aiwanzopambwa nevakomana vakwegura kupfuura iye, ruzivo rwakamuita kuti anzwe asinganzwisisiki asina simba uye akaoma.
Asides kuve murwi wemumugwagwa Tyson aive zvakare mushandisi wemishonga. Akatanga kuyedza cocaine paakange ave nemakore gumi nerimwe uye ndokuenderera mberi nekuita zvisina kufanira kwemakore mazhinji.
Mike Tyson Bio - Yekutanga Basa Roupenyu:
Pasi paD'Amato nhungamiro, Tyson akakura kuti ave mutambi wenhabvu anobudirira uye akawanikwa aine hunhu hwakakodzera. Akachengetedza nzvimbo muma1981 Olimpiki kwaakakunda menduru yegoridhe nekurova Joe Cortez.
Mike Tyson Biography - Mugwagwa Kune Mukurumbira Nhau:
1984 raive gore iro rakarasikirwa naTyson mudzidzisi wake kumaoko ekupedzisira erufu. Rufu rwaAmato rwakanyanya kurwadza Tyson nekuda kwekuti maneja maneja akawedzera zvakapetwa semuchengeti kana baba vanozvitsiva avo vakapa hupenyu hwaTyson nhungamiro ine zvibereko.
Sa maneja, Amato aigara achisimbisa kuti Tyson aive "Murwi akanakisa pasi rose" uye mudiki akura muchibvumirano ichocho. Hazvishamise kuti vazhinji vakakurumidza kupa matambudziko akatevera aTyson kumiswa kwehunhu hwakanaka hwakanga hwambopihwa naAmato.
Mike Tyson Biography - Kumuka Mukurumbira Nhau:
Achifambira mberi, Tyson akachinja unyanzvi mu 1985 uye akaita shanduro yake yekutanga semuchina wemakore 18 musi we6th yaMarch gore iroro. Akanga ane 28 ari kurwisana mugore rake rokutanga uye akakunda 26, achizviita semuongorori wechirwere chemutambo weightweight.
Mushure mekukunda kurwira kwake kwekutanga kuterevhizheni kurwisa Jesse Ferguson munaFebruary 1986, Tyson akawedzera mamwe matanhatu ekugogodza kukodhi yake asati akunda Trevor Berbick mumutambo weheavyweight mukwikwidzi waNovember 6 22.
Nekukunda, Tyson, ane makore makumi maviri nemwedzi mina akazove shasha yehuremu hunorema munhoroondo.
Mike Tyson Hukama Hupenyu Hupenyu:
Kutanga nehupenyu hwake hwepamberi hwemhuri, Tyson akatanga kuroora mutambi weAmerica, Robin Givens. Yavo yaive mubatanidzwa wakangogara kwegore chete (1988-1989) vasati vaenda vakasiyana nzira. Nekuda kweizvozvo, hapana mwanakomana (s) kana mwanasikana (s) akazvarwa mumubatanidzwa.
Imba yavo inokomborerwa nevana vaviri. Ivo vanosanganisira mwanasikana Milan Tyson (zvino anonoka) uye mwanakomana, Morocco Tyson.
Mike Tyson anobva kumuchesi wezera remhuri. Tinokuudza chokwadi nezvehupenyu hwemhuri yake.
Nezve baba vaMike Tyson: Jimmy Kirkpatrick aive baba vaTyson. Akasiya mhuri nguva pfupi mushure mekuzvarwa kwaTyson.
Nezve amai vaMike Tyson: Lorna Smith aive amai vaTyson. Kusiyana nemadzimai mazhinji, aive nehunhu hwakashata muhupenyu hwaTyson (s) uye anonzi akamupa zvinodhaka nedoro munguva yehupenyu hwake hwepakutanga.
Nezve Mike Tyson's Sibling: Mike Tyson achingova nemunin'ina uye hanzvadzi. Ivo vanosanganisira mukoma wake mukuru Rodney Tyson uye mukuru mukoma Denise Anderson.
Rodney ane makore mashanu akura kupfuura Tyson uye anoshanda saTrauma Chiremba apo Denise aive hanzvadzi yaTyson chete. Iye anonzi aive padyo nemubati wetsiva akarega basa panguva yehudiki hwake hwaimunetsa uye akachengeta hukama hwepedyo naye kusvikira afa nekenza mu1990.
Nezve hama dzaMike Tyson: Kure kubva kumhuri yaTyson yepedyo zvishoma zvinozivikanwa nezvesekuru nasekuru vake pamwe nasekuru vake nasekuru naambuya.
Anotaurirana, anononoka, akadzikama, akasimbisa uye asingatauri anopa ruzivo rwakanangana nehupenyu hwake uye hwepachivande. Kufarira kwake uye kuzvipira kunosanganisira pigeon racing, kurera zvisiri izvo zvipfuwo, kutamba chess uye kushandisa nguva yakanaka neshamwari dzake nemhuri.
Mike Tyson anoda hangaiwa uye ane zvido mumhanyi enjiva.
Mike Tyson ane mari inofungidzirwa kuti inosvika $ 3 miriyoni panguva yekunyora. Pamusoro wepamusoro pebasa rake retsiva, Tyson aimbove anodarika madhora mazana matatu emadhora asi akashandisa mari zvine mutsindo ndokuzivisa kubhuroka muna 300.
Nekudaro, iyo ngano inoramba ichifunga nzira dzekuchengeta musoro wake pamusoro pemvura sezvo achirarama hupenyu hwoumbozha mukati mekwanisiro ake.
Humbowo hwehupenyu hwakadai hunosanganisira kuve neImba yeLas Vegas inokosha madhora zviuru zviviri nezviuru zvemadhora. Imba yakasarudzika inogara pamatatu-echina eekare uye ine zvivakwa zve Deluxe senge gorufu, media media pakati pevamwe.
CHOKWADI KUTI: Thanks for reading vedu Mike Tyson Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At childhood biography, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!